Kheyraadka Internetka - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Xiriirinta Macluumaadka Internetka
Maktabada Degmada Hennepin - Goobta TeenLinks ee E-Library ee Degmada Hennepin waxay soo bandhigaysaa ilo iyo agabyo aad u ballaaran oo laga heli karo aaggeenna. Maqaallada laga soo qaatay encyclopedias, joornaalada, iyo joornaalada ayaa la heli karaa oo lagala soo bixi karaa. Kheyraadka kale waxaa ka mid ah tilmaamaha cilmi baarista, makiinadaha wax raadinta, iyo sidoo kale marin tooska ah ee Katalogga Maktabadda.
World Book Online - World Book Encyclopedia Online wuxuu leeyahay maqaallo, sawirro, iyo khariidado la soo dejin karo oo la daabici karo. Hal muuqaal oo gaar ah waa maktabad yar oo miisaska tirakoobka ah oo bixiya sawirro muuqaal ah oo xog ah.
Lugayn / Dukumiinti
Mashiinka Tixraaca waa aalad Websaydh is-dhexgal ah oo loogu talagalay inay ka caawiso macallimiinta iyo ardayda soo saarista tixraacyada tixraaca si loogu qoro macluumaadka dadka kale.
Mar alla markii aad tagto 'Easybib' , isticmaal liiska hoos u dhaca xagga sare si aad u doorato nooca ilaha aad sheegayso. Gali macluumaadkaaga xigashada. Ku celceli hawshan shay kasta oo ku jira liiska kheyraadkaaga. Buug-gacmeedkaaga ayaa loo abuuri doonaa oo laguu keydin doonaa adiga, laakiin xusuusnow inaad qorto lambarka tixraacaaga si aad mar kale uga hesho mar dambe!
Khadadka isku xidhka waxaa laga heli karaa oo keliya MHS
Infotrac - joornaalada isku dhafan oo buuxa, joornaalada iyo buugaagta tixraaca ee dhacdooyinka hadda jira, farshaxanka, sayniska, dhaqanka caanka ah, caafimaadka, dadka, dowlada, taariikhda, isboortiga iyo inbadan.
EBSCO - Waxaa laga soo xulay afar xog-ururin oo ay ka mid yihiin Raadinta Tacliinta Sare ee loogu talagalay hay'adaha tacliinta, waa tan adduunka ugu weyn ee cilmiga leh, anshax-marinta edbinta buuxa ee qoraalka oo ay ku jirto qoraal buuxa oo loogu talagalay in ka badan 4,700 daabacadood, oo ay ku jiraan in ka badan 3,600 daabacaadda asxaabtooda.
ProQuest - Helitaanka wargeysyada laga soo bilaabo 1970 ilaa hadda. Waxaa ku jira qoraalka buuxa ee maqaallada wargeyska StarTribune, 1990 ilaa hadda.
Macaamiisha Caafimaadka Dhamaystiran waxay siisaa marin u helka warbixinnada caafimaadka ee caddaynta ku saleysan, encyclopedias, buugaag yaryar iyo buugaag tixraac ah. Goobta sidoo kale waxaa ku jira sawirro, jaantusyo, fiidiyowyo iyo animations.
Dhibcaha Xarunta Tixraaca Aragtida waxay ka kooban tahay isku dheelitirnaanta agabyada laga soo qaaday dhammaan aragtiyada, oo ay ku jiraan in ka badan 1,200 oo qormooyin waaweyn ah, oo horseed u ah joornaalada siyaasadeed ee labada dhinacba ka soo baxa, wargeysyada, qoraalada raadiyaha iyo TV-ga, dukumintiyada ilaha aasaasiga ah iyo buugaagta tixraaca.
Xarunta Cilmibaarista Ardayda - Dugsiga Sare Boggan wuxuu kaa caawinayaa inaad ka raadsato maqaalada joornaalada, joornaalada, buugaagta, taariikh nololeedka, qoraalada warbaahinta, warbixinnada dalka iyo dukumiintiyada asaasiga ah.
Matoorada Raadinta Internetka
Weydii Jeeves - Mashiinkaan raadinta ee gaarka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si toos ah ugu qorto su'aashaada.
Google - Fudud, fudud oo loo isticmaalo mashiinka raadinta.
Xarunta Warbaahinta - Dekedda /